ZigWay - Home | Facebook
See more of ZigWay on Facebook
18 Mingalar Street (8,565.33 mi)
+95945348 9200
Contact ZigWay on Messenger
Organizations in Yangon
ZigWay has no reviews yet.
Zig Way သည် ၀င်ငွေနည်းပါးသော မိသားစုများအတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များ အဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်ကာ မြန်ဆန်၍ သက်သာသော အသေးစားချေးငွေများကို ထုတ်ချေးကူညီပေးရန်အတွက် Mobile ချိတ်ဆက်နည်းပညာများကို ဖန်တီးနေသော နည်းပညာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
At ZigWay, we are buildingamobile technology platform to help low-income families access NanoLoans, quick, cheap and flexible loans to cover their daily needs.
Failure is not the opposite of success-it's part of success.
အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ငွေကြေးဆင်းရဲသောမိသားစုများ၏အကြွေးသံသရာထဲမှရုန်းမထွက်နိုင်ရသောအကြောင်းအရင်းများကို တွေ့ ရှိလင့်ကစား အချိန်တိုတွင်းပြောင်းလဲပေးနိုင်ရန်အပြင်းအထန်ကြိုးစားရခြင်း၊ပြောင်းလဲရန်
Microfinance institutions have explored the issue, but labour- intensive processes, unfavourable regulation and tech landscape have prevented them from providing the right answer to the problem.
We wish youajoyful,healthy and prosperous new year ahead!
Don't wait for change,be the change.
'In addition to higher interest rates, moneylenders also often prolongaloan by refusing to accept any payment less than the full amount and put public pressure on clients to repay. Households can easily find themselves trapped in debt.'Read more about how start-up takes on moneylenders with short-term microfinance loan options-Steve Gilmore,Myanmar Times,October 2016.Read the full article here: http://bit.ly/2AJiRGB
Image courtesy of Myanmar Times.
"Inacountry with 50 million inhabitants, 2.5 million adult Burmese still do not have access to financial services such as loans or savings accounts" according to the UN Capital Development Fund UNCDF." Read more about how ZigWay is working to make financial services more accessible. http://bit.ly/2AClfQl
Image courtesy of Mondiaal Nieuws
"Experts estimate that the rates of indebtedness in some areas of Yangon are as high as 70 to 80 percent of the population. Anthropologist and independent consultant Maxime Boutry said that while health issues are one of the most common reasons families take out loans, debt can also be linked to funerals and novitiate ceremonies, or even daily food expenditures." Catherine Trautwein, Myanmar Times, September 2016. Read the full article here http://bit.ly/2BLOksN
Image courtesy of The Myanmar Times
Debt trap another hurdle for urban poor
On the outskirts of Yangon, inaramshackle neighbourhood in one of the city’s poorest areas, more people owe money than don’t, and many take on loans at high interest rates, not for investment purposes, but merely to survive.
More than half of low-income families in urban Myanmar rely on informal money lending to smooth their irregular daily incomes. With usurious interest rates and difficult repayment conditions, families who initially borrowed small amounts to cover basic daily expenses, like food oradoctor visit, end up trapped in debt.
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ZIGWAYရဲ့တွဲဖက် တည်ထောင်သူတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့Miranda Phua က ZIGWAYမြန်မာပြည်လာရောက်ဖြစ်ပုံ ကိုပြောကြား မှာဖြစ်ပါတယ်။ 'မြန်ပြည်ဟာ တစ်ဟုန်ထိုး ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ နည်းပြည်ညာနဲ့အတူ လိုက်လျောညီထွေရှိတဲ့ ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါ့အပြင်
Co-founder, Miranda Phua on why ZigWay is here in Myanmar: "it's an exciting market with rapidly developing technology. There is alsoahuge need for innovation to alleviate people from their burdensome debt obligations with moneylenders. We aim to provide cheap, accessible loans that are free from loan sharks."
ZIGWAY ဖြင့်ငွေချေးလျှင် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်မလဲ?
၃။သက်သာ စွာဖြင့်ငွေချေးနိုင်ခြင်း စတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်
Three advantages of gettingaloan from ZIGWAY?
2. Fast and
အားလပ်ရက်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ရန်ကုန်ရေ!
Happy Friday, Yangon! Let the weekend begin!
ZigWay updated their info in the about section.
ZigWay updated their profile picture.
ZigWay added2new photos.
It's Walkabout YGN Day!
Come to our office to learn about how we're helping low income families access cheap loans with the power of their mobile phones! Stay and eat some snacks, try our app and takeaselfie, just like Jolyn did this morning!
For more information, check out the event link below...
ဒီနေ့က Walkabout YGN နေ့လေနော်။
ဝင်ငွေနည်း မိသားစုများ အတွက် စွမ်းအားရှိတဲ့ သူတို့ Smartphone ကို အသုံးပြုပြီ သက်သာတဲ့ချေးငွေ ကိုထုတ်ချေးနိုင်ရန် ကြိုးစားနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ Startup ရုံးခန်းလေးကို လာလည်ဖို့၊ လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောရင်း၊ စားသောက်ဖွယ်ရာလေများကို စားရင်း၊ ကျွှန်တော်တို့ရဲ့ Mobile Application ကို စမ်းသပ်ရင်း၊ အမှတ်တရ Selfie လေးတွေရိုက်ကြမယ်လေ။ ဒီမနက်မှာတော့ ပထမဆုံး ဧည့်သည် Jolyn လေး အချိန်ပေးသလိုပေါ့။
အသေးစိတ်အချက်အလက်လေး မသိသေးရင် www.walkaboutygn.com မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ပါဝင်ရန် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီနကေ့ Walkabout YGN နလေ့နေျော။
ဝငျငှနေညျး မိသားစုမြား အတှကျ စှမျးအားရှိတဲ့ သူတို့ Smartphone ကို အသုံးပွုပွီ သကျသာတဲ့ခြေးငှေ ကိုထုတျခြေးနိုငျရနျ ကွိုးစားနတေဲ့ ကြှနျတျောတို့ Startup ရုံးခနျးလေးကို လာလညျဖို့၊ လလေ့ာဖို့ ဖိတျချေါပါတယျ။
အေးအေးဆေးဆေး စကားပွောရငျး၊ စားသောကျဖှယျရာလမြေားကို စားရငျး၊ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ Mobile Application ကို စမျးသပျရငျး၊ အမှတျတရ Selfie လေးတှရေိုကျကွမယျလေ။ ဒီမနကျမှာတော့ ပထမဆုံး ဧညျ့သညျ Jolyn လေး အခြိနျပေးသလိုပေါ့။
အသေးစိတျအခကျြအလကျလေး မသိသေးရငျ www.walkaboutygn.com မှာ ကွညျ့ရှုနိုငျပွီး ပါဝငျရနျ စာရငျးပေးသှငျးနိုငျပါတယျ။
#walkygn #ZigWay #OpenHouse GEN Myanmar